1915 akkanakkale တံတားသည်ဒေသအတွင်းတွင်အမှတ်အသားပြုခဲ့သည် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး17 Canakkale1915 Canakkale တံတားဒေသတွင်းတံဆိပ်ခေါင်းရိုက်နေသည်
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 17 Canakkale, အထွေထွေ, hyperlink များ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Canakkale အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Orhan annealed, မတ်လ 18 2017 1915 အပေါ်ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အားဖြင့်ထား Dardanelles တံတားရိုးအမြစ်ကိုဆောက်လုပ်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
စာချုပ်နှင့်အလီ Alper Orkin ဝန်ထမ်းဦးစီးချုပ်စစ်ဆေးရေး Naci Cetin, Eyup Yilmaz လည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Orhan annealed တွေ့ Lapseki အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Tahir Sahin နှင့် Lapseki မြို့တော်ဝန်လေ့လာတွေ့ရှိချက်, အဝေးပြေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုပြည်သူ့၏ပုဂ္ဂလိကမိတ်ဖက် Bursa ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Sezgin Küçükbekirကနေတံတားအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Dardanelles မျှော်စင်, တစ်ချိန်ကပြီးစီးခဲ့ 1915-ခြေလျင် Mid-span နှင့်အတူလျှင်မြန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော 100 Canakkale တံတား, အ xnumx'nc ကိုယ်စားပြုဒီဇိုင်း၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံနှစ်ပတ်လည်နေ့တစ် drawbridge ခေါင်းစဉ် 2023 Dardanelles တံတားနှင့်အတူကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Mid-span ရပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုတိုက်ကြီးဆောက်လုပ်ရေးပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် လင့်များနှင့်အနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်၏တူရကီအလံအရောင်များကိုခြယ်ခံရဖို့ element တွေကိုချိတ်ဆက်ပါက Gallipoli အတွက်စည် ယူ. ခွံဖော်ပြမြင့် Seyit ရဲ့ကိန်းဂဏန်းများမှာမျှော်စင်၏အထက်ပိုင်းအတွက် 1915 မီတာနှစ်ဖက်စလုံးကသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
1915 မီတာရှည်လျားတစ်ဦးစုစုပေါင်း 770 တထောင်နှင့်အတူ3Canakkale တံတား 563 မီတာဘက်အဖွင့်, အတူတူ, 365 နှင့် 680 မီတာ viaducts အတူကျမ်းပိုဒ်၏စုစုပေါင်းအရှည် 4608 x ကို2အသွားအလာတံတားသံမဏိမျှော်စင်အမြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3မီတာပါလိမ့်မည်သောင်တင်လိမ့်မည်မီတာ 318 ပါလိမ့်မယ် မတ်လ 18 ကိုယ်စားပြုမည့်နှင့် Canakkale ရေတပ်အောင်ပွဲနှစ်ပတ်လည်နေ့, ။
လေထုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အတူရထားလမ်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုပေးကြောင်း Malkara-Canakkale အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့် 1915 Canakkale တူရကီရဲ့စီးပွားရေးအရှိဆုံးဖွံ့ဖြိုးသောဒေသများဖြစ်သည့်တံတားနှင့် Marmara အစ်ဂျီးယန်းဒေသကြီးအတွင်းရှိလူဦးရေနှင့်ဆိပ်ကမ်းဘယ်မှာသိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အမှုအရာ, ဤဒေသများအတွင်းကမျှတတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များ၏ဖန်တီးမှုစီစဉ်ခြင်းနှင့် structuring အဆောက်အဦများကိုပါလိမ့်မယ်။
1915 အဆိုပါ Dardanelles တံတားစီမံကိန်းကိုဒေသပတ်ဝန်းကျင်, သဘောသဘာဝနှင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သောသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ရန်သောသမိုင်းဝင်ဧရိယာမထိခိုက်စေရှောင်ရှားရန်ကိုလယ်အလုပ်ကိုသူကလူများ, အားပေးခံရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ, ပင်လယ်ရေနှင့်ရေကိုခြောက်ဘဝတွေကို၏ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးတို့ကိုယူ, ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့်စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်သဘောသဘာဝတစ်ဦးသင်္ကေတတံတား 1915 Canakkale လေးစားမှု၏လုံခြုံတဲ့ဧရိယာမှပြောင်းရွှေ့ရသော၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကတည်းကအမည်ရှိ scallop mussel မျိုးစိတ်များ၏ Pinna Nobilis တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတစီမံကိန်းကိုသောကြောင့် Dardanelles မှမိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
ဘယ်မတ်လ 18 2022 1915 Canakkale Dardanelles ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုအားဖြင့်စျေးကွက်မှအကွာအဝေးပေါင်းကူးတို့သည်ကြီးစွာသောအလှူငွေပေးအပ်, Canakkale ၏သဘာဝအလှတရားနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းမှကြီးမြတ်တက်ကြွဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
1915 Dardanelles တံတားကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားဖွစျလိမျ့မညျ 20 / 06 / 2017 1915 Dardanelles တံတားကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံ 1915 "သူတို့က 2023 နှစ်ပေါင်းတက်ခြုံဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်, ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, 100 Canakkale တံတားကျွန်တော်တို့ရဲ့တံတားများနှင့်အတူ 20232တထောင် 23 မီတာနှစ်လယ်ပိုင်း span ယခုနှစ်သင်္ကေတမှနှစ်ပတ်လည်နေ့, များ၏ဗဟိုအဖွင့်နှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုအရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတား olacak.`` ကဆိုသည်။ ဝန်ကြီး Arslan ဟုစည်ပင်သာယာ Square ကို '' ကောင်းမွန်သောအဘို့ဆုတောင်းချက် '' မှာကျင်းပTekirdağအဖုံးခရိုင်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့။ အမ်းစထရောင်းအစ္စတန်ဘူလ်မှတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ Tekirdag စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူဒီမှာစီးပွားရေးကိုစကားပြော စီးပွားရေးပြန်လည်နှင့်အတူသူသည်တူရကီအလွန်အရေးကြီးသောစင်တာကပြောပါတယ်။ Tekirdag အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 142နှစ်ပေါင်း ...
1915 Canakkale တံတားတံတားကမ္ဘာပေါ်မှာနံပါတ်တစ်ခုမှာသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည် 2022 22 / 03 / 2019 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, အ Dardanelles တံတားလုပ်နေတာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတံတား 1915're ။ 1915 Canakkale တံတား, 2022 ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ဦးကိုရေတွက်တံတားအဖြစ်အစေခံရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ "သူကပြောသည်။ အဆိုပါ Izmit-ပြောင်းရွှေ့သည်အထိ Catalca ၏မြောက် Marmara ကားလမ်းဥရောပဘက်ခြမ်းအချိန်အထိကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှု Anatolian ခြမ်းဖွင့်လှစ်။ အဲဒီတည်ဆောက်-operate-လွှဲပြောင်းစီမံကိန်းများကို Akhisar ကျနော်တို့ Balikesir transitions အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်အရေးပါသောအချက်များဖြစ်ကြ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်-Izmir ကားလမ်း။ ဤစီမံကိန်း 10 ဒေါ်လာဘီလီယံစီမံကိန်းကို။ Osmangazi တံတားသည်ယခင်နှစ်များတွင် Bursa, Manisa အသွင်ကူးပြောင်းမှု, ကျနော်တို့İzmir-Kemalpaşaလိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်လှစ်, Balikesir ကျန်ရှိသော 190 Bursa ကီလိုမီတာ Balıkesir-Akhisar Savaştepeလိုင်းနှင့်အတူဖြတ်တောက်မှုများအကြားအကူးအပြောင်းအတွက်မြို့ပြင် segments များ ...
Canakkale 1915 တံတားပြီးစီးမည်သည့်အခါ 08 / 07 / 2016 Canakkale 1915 တံတားပြီးစီးမည်သည့်အခါ: Mega စီမံကိန်းများကိုပိုပြီးeklenіybіyenіsіဖြစ်ကြသည်။ Dardanelles တံတားစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်bіဖြစ်ပါတယ်။ Canakkale 1915 2023 မီတာနှစ်လယ်ပိုင်း span တံတားကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားဖြစ်လိမ့်မည် Dardanelles ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ Pekі Dardanelles တံတားbіtလိမ့်မယ်သောအခါ, တံတားထွက်ရပ်ကဘာလဲözellіklerі? မဟာစီမံကိန်းကြီးBіtіy, Mega စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီhіzmetမှပွင့်လင်းကြသည်။ İzmіမှအစ္စတန်ဘူလ်іlနာရီönemlіခြေkörfezіnіkіကော်လာbіrleştіr Osman Gazіတံတား9Hazіranအတွက်အခမ်းအနားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်bіအဆိုပါအဝေးပြေးProjesі'nіnbіrіရာ Gebze-Orhangazі-İzmііndіrမှ 3,5 arasındakіသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးsüresіnі 30 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ Yavuz Sultan Selіm ...
မတ်လအတွက်သိမ်းယူခံရဖို့ 1915 18 Dardanelles တံတားအုတ်မြစ် 19 / 08 / 2016 Canakkale တံတား၏ 1915 18 အခြေခံမတ်လသွင်းယူ: AK ပါတီလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌÇanakkaleလက်ထောက် Bulent Turan, အ Dardanelles တံတား၏ 1915 18 အခြေခံမတ်လ 2017 အတွက်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ Canakkale တံတားလက်ထောက် Bulent Turan ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု "ဟုအဆိုပါ Dardanelles တံတားထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသူ 1915 ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအများကြီးပိုရှည်ဂရုစိုကျကြည့်ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သမိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးထုတ်ဖော်ပြသပေးတော်မူပြီ။ တံတားနှစ်ခုခြေထောက်သမ္မတနိုင်ငံမှ 100 ဖွင့်လှစ်ကြောင်းလူသိများ။ 2023 နှစ်မီတာနှင့်အညီဖြစ်လိမ့်မည်။ 2023 မီတာနှစ်လယ်ပိုင်း span တံတားကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးရပ်ဆိုင်းမှုတံတားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Dardanelles တံတားနှင့်အတူ ...
သစ်ကိုလမ်းကြောင်းလွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ Canakkale 1915 တံတား 06 / 10 / 2016 သစ်ကိုလမ်းကြောင်းလွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ Canakkale 1915 တံတား: ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Ahmet Arslan အဆိုပါ Dardanelles တံတား 195 လမ်းကြောင်းနူးညံ့သွားပါလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Dardanelles တံတားနှင့်လင့်ခ်လမ်းအကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်းကျယ်ပြန့်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan မြောက်အမေရိက Aegean Thrace ဒေသများ၏လေလံလုပ်ဖို့အလွန်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာရှင်းပြမှာတော့အစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ ဝန်ကြီး Ahmet Arslan အဆိုပါ Dardanelles တံတားနုကမ်းလှမ်းမှုကိုဘို့ကောက်ယူရပါမည်ဇန်နဝါရီလ 2017 1915 ကပြောသည်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, 1915 အဆိုပါ Dardanelles တံတား လုပ်. , လည်ပတ်, လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်ကျင်းပလိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။ 9.843.000.000 နှုန်းစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ...